जागिर खाने राउटे युवाको रहर – Sajha Bisaunee
जागिर खाने राउटे युवाको रहर
। २५ चैत्र २०७४, आईतवार १२:५३ मा प्रकाशित
डुङ्गेश्वर (दैलेख), २४ चैत ।
बस्तीमा प्रायः नयाँ व्यक्तिहरूको आउजाउ भइरहन्छ । नेपाली मात्र होइन, बेलाबेला विदेशीहरू पनि पुग्छन् । आफ्नो बस्तीमा पुग्ने जोकोही नयाँ मनिसलाई उनी आफ्नो सपना सुनाउँछन्, ‘मलाई जागिर खाने रहर छ, पढ्न पनि मन छ । तर मुखियाले स्कुल जान दिदैंनन्, तपाईंले केही जागिर मिलाइ दिनुहुन्छ की ?’
दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकास्थित पराजुली खोलाको किनारमा ४६ वटा साना छाप्रासहितको राउटे बस्ती छ । त्यही बस्तीको एउटा छाप्रा नजिकै भेटिएका २० वर्षीय राउटे युवा दीपक शाहीले भने, ‘आजसम्म स्कुल जान पाइएन, जंगलमा बस्ने मान्छेहरू कसरी स्कुलमा पढ्न जानु ? अब नपढेको मान्छेलाई जागिर पनि पाइदैंन, जागिर मिलेको भए हामी जंगलमा भोकभोकै बस्नु पर्थेन होला ।’ दीपकले आफ्नो सपना सुनाइ रहँदा उनका बाबु भने निःशब्द थिए । कारण उनमा छोराको जागिर खाने रहर पूरा गरिदिने सामथ्र्य नै थिएन ।
आकाशको पानी र घामसमेत नछेक्ने सानो छाप्रोभित्रै दीपकको जागिर खाने ठूलो सपना दबिएको छ । अन्धविश्वास र घुमन्ते जीवनका कारण राउटे समुदायमा कसैले पनि शिक्षा आर्जन गरेका छैनन् । अशिक्षाका कारण आफूहरूले दुःख पाएको र जागिर खान नपाएको बुझेका राउटे युवाहरूमा पछिल्लो समय जागिर खाने रहर पलाउँदै गएको छ । उमेरले २० वर्ष कटेका अर्का राउटे युवा दिशबहादुर शाहीले आफ्नो सपना सुनाउँदै भने, ‘जंगलमा शिकार छैन, काठको काम पनि हुन छोड्यो । अब जागिर खाने हो, नपढेको भए पनि केही काम गर्न मिल्ने जागिर त मिल्छ होला नी ?’ उनले मिल्ने भए आफूलाई प्रहरीमा जागिर खाने रहर भएको सुनाए । दीपक र दिशबहादुर जस्तै राउटे बस्तीमा नयाँ पुस्ताले विद्यालयमा पढ्ने र जागिर खाने सपना बुनिरहेको छ ।
‘विस्तारै परिवर्तन हुँदै जाला, विस्तारै सबै ठीक हुन्छ’ शिरमा रहेको आफ्नो टोपी मिलाउँदै दीपक शाहीले थपे, ‘पहिला त खुट्टामा चप्पल पनि लाउन दिन्थेनन् मुखियाले, विस्तारै चप्पल लगाउन थालेका छौं । यो नेपालको टोपी पनि लगाउन थालेका छौं, विस्तारै स्कुल पनि जाने दिन आउँछन् ।’ बस्तीका अन्य युवा भन्दा केही जिज्ञासु र हँसिलो स्वभाव भएका दीपक नयाँ मान्छे पुग्ने वित्तिकै आफ्नो जागिर खाने रहर सुनाउँछन् । त्यतिमात्र होइन, उनी आफ्नो बस्तीमा शिक्षकको व्यवस्था गरेर शिक्षा दिनुपर्ने भन्दै आग्रह पनि गरिरहन्छन् । उनले भने, ‘हामी स्कुल जान सम्भव छैन, बरु बस्तीमा मास्टर ल्याउनुप¥यो । पढेर जागिर खाने हो, हाम्रो मुखियालाई सम्झाइ दिनुहोला ।’ मुखियाले नै नमान्ने भएकाले आफूहरू विद्यालय जान सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
अचेल जंगलमा काठ काट्न र शिकार पनि खेल्न नपाइने भन्दै दिशबहादुरले अब पेट भर्नका लागि आफूहरूलाई जागिर नै चाहिने बताए । उनले भने, ‘पढाइ त छैन, पढाइ नहुँदा पनि केही जागिर त मिल्छ होला । जागिर गरेर कमाइ गर्नुप¥यो, नत्र अब हामी कसरी बाँच्ने ?’ उनले जागिर गर्दा सहरमा घुम्न पाइने र नयाँ लुगा लगाउन पाइने बताए । दीपक र दिशबहादुरले बस्तीमा पुगेका कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद धर्मराज रेग्मी र डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष नगेन्द्रबहादुर मल्ललाईसमेत आफ्नो जागिर खाने रहर सुनाए । साथै उनीहरूले आफ्नो बस्तीमा शिक्षकको व्यवस्था गरेर पढ्ने वातावरण मिलाउन आग्रह गरे । राउटेको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था राउटे उत्थान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सत्यदेवी अधिकारीले भनिन्, ‘नयाँ पुस्तामा चेतना बढेको
छ, उनीहरू केही काम गर्न चाहन्छन् । राउटे युवाको क्षमता अनुसार सरकारले काम दिन जरुरी छ, बस्तीमै शिक्षकको व्यवस्था गरेमा उनीहरू पढ्न पनि तयार छन् ।’
राउटे समुदायमा शिक्षा आर्जन गरेमा पाप लाग्छ भन्ने अन्धविश्वास कायमै छ । यही अन्धविश्वासका कारण राउटे समुदायमा हालसम्म कसैले पनि विद्यालयबाट औपचारिक शिक्षा लिएका छैनन् । यद्यपी पछिल्लो पुस्ताले पढाइप्रति रहर गर्न थालेको छ । यो समुदायमा मुखिया नै निर्णायक हुन्छन् । मुखियाको आदेश नै राउटेका लागि कानुन सरह हो ।
पढ्ने रहर हुँदाहुँदै पनि विद्यालय जानबाट वञ्चित भएपछि राउटे यूवा दीपकले भने, ‘अब हामीले पनि पढ्नुपर्छ, नपढेर त जागिर नै पाइदैंन । तर अहिले मुखियाले स्कुल जान दिदैंनन्, विस्तारै सबै ठीक हुनेछ ।’ दीपकले आफ्नो मुखिया बन्ने योजनासमेत सुनाए । उनले भने, ‘रहर भएर के गर्नु ? मुखियाले नमानेपछि कसैको केही चल्दैन । अब विस्तारै म नै मुखिया बन्नेछु, म मुखिया बनेर बस्तीका सबैलाई पढाउनेछु ।’ पछिल्लो समय रक्सीले बस्तीमा बिर्गान थालेको भन्दै उनले आफूहरूले रक्सीको साटो कोक पिउने गरेको बताए ।